Susan B. Anthony (ပို, ဘဝ, အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး) ကိုးကား
(- 1906 1820)
အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင် ဧလိရှဗက် Cady Stanton တို့ , Susan B. Anthony တစ်မူလတန်းစည်းရုံးရေးမှူး, စပီကာများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 19 ရာစုအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု, အမျိုးသမီးရဲ့မဲများအတွက်ရှည်လျားရုန်းကန်အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးအဆင့်, အမျိုးသမီးမဲပေးပိုင်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မိန်းမသည်စာရေးဆရာခဲ့ မဲပေးခွင့်လှုပ်ရှားမှု။
Selected Susan B. Anthony ကိုးကားချက်များ
• ယောက်ျား - သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပိုပြီးဘာမျှမ; အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် - သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်လျော့နည်းဘာမျှမ။
• အဆိုပါအဟောင်းတွေငါငါသည်ဤလောက၏ကူညီဖို့ရန်ရှိသည်ဟန် သာ. အာဏာကိုရ; ငါ snowball ကဲ့သို့ဖွစျ - ထိုနောက်ထပ်ငါသည် သာ. ငါရရှိရှင်းပြီနေပါတယ်။
• ဒါဟာကျနော်တို့, လူများရှိ၏ မဟုတ်ငါတို့သည်အဖြူရောင်အထီးနိုင်ငံသားများ; မဟုတ်သေးငါတို့သည်ယောက်ျားနိုင်ငံသားများ; ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းသူတစျခုလုံးကိုကလူ။
• အမှန်မှာအမျိုးသမီးတွေချည်နှောင်ဖြစ်ကြကြောင်း, သူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်အားလုံးပိုယုတျညံ့သညျ့ဖြစ်ပါတယ်။
• အဖြစ်ငြင်းမျှလည်းမရှိရာအတွေးရန်, ဝိညာဉျသရန်, ဒါဟာဘယ်လောက်ပိုပြီးရယ်စရာ .... ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလေထု, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုစမ်းသို့မဟုတ်ရွာသွန်း, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနေရောင်ခြည်၏စကားပြောရယ်စရာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကို ဆက်စပ်. ၌တည်ရှိ၏ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပညာရေးနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကျောင်းစကားပြောရန်လိင်ကဲ့သို့သောအရာ။ [အဲလစ်ဇဘက် Cady Stanton တို့နှင့်အတူတိကျမ်းစာ၌လာသည်]
• [T က] ဤနေရာတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဥပဒေများစေနှင့်ဥပဒေပြုအမတ်များကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ကူညီအမျိုးသမီးတွေသည်အထိပြီးပြည့်စုံတန်းတူညီမျှမှုရှိလိမ့်မည်ဘူး။
• မှီခို၏ပေါင်မုန့်ကိုစားလိုသူကိုမွေးဖွားထိုမိနျးမ, ကအဖေ, ခင်ပွန်း, ဒါမှမဟုတ်အစ်ကို၏လက်မှဖြစ်စေနေပါစေမရှိပါ; ဒါကြောင့်သူမ၏ပေါင်မုန့်ကိုသူကယူတော်မူသောအနေဖြင့်လူတစ်ဦး၏တန်ခိုးအတွက်သူ့ကိုယ်သူနေရာကိုစားပါဘူးသူကိုတစုံတယောက်သောသူသည်များအတွက်။
• ယခုအခြေချခံရဖို့ကျန်ရစ်တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: အမျိုးသမီးတွေပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော ထိုအခါငါခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဆိုသူတို့မဟုတ်ဆိုသညျကားဖို့ hardihood ရပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခြင်း, ထို့နောက်, အမျိုးသမီးများနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်; နှင့်မျှမတို့ပြည်နယ်မဆိုဥပဒလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အခွင့်ထူးသို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးချုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုအဟောင်းဥပဒေ, ပြဋ္ဌာန်းရန်ရန်။ ထို့ကွောငျ့အများအပြားပြည်နယ်များများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနှင့်ဥပဒေများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ဆန့်ကျင်တိုင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု Negroes ဆန့်ကျင်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်တိကျစွာအဖြစ်ပျက်ပြယ်သွားပြီဟုယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
• ယနေ့ဤလူမြိုး၏လူများ one-တစ်ဝက်ပညတ်တော်စာအုပ်ပေါင်းတစ်ဦးထံမှမတရားဥပဒချေဖို့, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာသစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမယ့်တဦးတည်းရေးသားဖို့ရှင်းရှင်းအာဏာမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
• သူတို့ပြဋ္ဌာန်းကြောင်းအစိုးရ၏ဤပုံစံနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့မကျေနပ်အဆိုပါအမျိုးသမီးများ, ကိုယ်စားပြုမှုမရှိပဲအခွန် , - သူတို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးထားဖူးဘူးသောဥပဒေများကိုနာခံရန်သူတို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကြောင်း, - ထောင်ဒဏ်နှင့်တစ်ဂျူရီတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားတွဲလည်းဆွဲထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များ, လုပ်ခနှင့်ကလေးများ၏ချုပ်နှောင်ထား၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား၌သူတို့ဥစ္စာကိုဖြုန်းသောထိုသူတို့၏ရွယ်တူ, - လူအများ၏ဤတစ်ဝက်ကြေညာချက်များ၏ဝိညာဉ်နှင့်စာတစ်စောင်ကိုတိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်, အခြားတစ်ဝက်၏ကရုဏာတော်မှာလုံးလုံးကျန်ကြွင်း ဒီအစိုးရ၏ပုံစံ၏, အရာ၏အသီးအသီးအပေါင်းတို့အားတန်းတူအခွင့်အရေး၏မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနိယာမအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။
• အဆိုပါရာထူးနှင့်ဖိုင်ဒဿနပညာရှင်မဟုတ်, သူတို့ကလာသမျှကိုမိမိတို့အဘို့စဉ်းစားရန်ပညာတတ်မဟုတ်ပေမယ့်ရိုးရိုးကိုလက်ခံရန်, လုံးလုံးလြားလြား။
• သတိထား, သတိထားလူများ, အမြဲသူတို့၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်လူမှုရေးရပ်တည်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အကြောင်း ချ. တစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဘူး။ စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏တကယ်ရှိပါတယ်သူများသည်ကမ္ဘာ့ခန့်မှန်းချက်ထဲမှာဘာမှသို့မဟုတ်ဘာမျှမဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်နှင့်လူသိရှင်ကြားနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်, ရာသီအတွက်ထုတ်, မထီမဲ့မွငျမြားနှငျ့ညှဉျးဆဲစိတ်ကူးများနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကိုယ်ချင်းစာ avow နှင့်အကျိုးဆက်များကိုထမ်းရကြမည်။
• ငါကောလိပ်ကျောင်း-ရပ်ကြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအများဆုံးရောငျ့ရဲအမြိုးသမီးတကြောင်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ ပိုသူမ၏စိတ်ကိုကျယ်ပြန့်သူမယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားမညီမျှမှုအခြေအနေများ, သူမက tolerates တဲ့အစိုးရအောက်မှာ shafes ပိုနားလည်သည်။
• ကျွန်မတစ်ဦးလူသားရဲ့အိမ်အကူဖြစ်လာဖို့လွတ်လပ်မှုငါ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်နိုင်ခံစားခဲ့ရဘူး။ ကျွန်မငယ်စဉ်အခါကမိန်းကလေးတစ်ဦးဆင်းရဲသားကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်သူအိမ်အကူနှင့် drudge ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမချမ်းသာကြွယ်ဝလက်ထပ်ခဲ့လျှင်သူမအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်တစ်ဦးရုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
• နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပေါ်: သင်မည်သို့မီးပေါ်မှာရှိသမျှမဖြစ်နိုင်သလဲ ... ငါတကယ်သင်တို့တွင်အချို့သောအမျိုးသမီးငယ်နိုးထ --and ကအခြားရှေးရှေးထဲကနေ clutched ထားပါတယ်သစ်ကိုကျွန်းများပေါ်မှာဤလူမြိုး၏မကြာမီရာဇဝတ်မှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု၌ကိုယ်တော်၏အသံကိုမြှင့်ဘဲနေလျှင်ငါပေါက်ကွဲရကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နောက်တဖန်ရိုင်းစိုင်းတဲ့အထီးအစိုးရများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့အသက်ရှင်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အလုပ်သို့ရောက်ပါနဲ့။
• အတော်များများက စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး အမျိုးသမီး၏အခွင့်အရေးများ၏ ABC ရုပ်သံသင်ယူဖို့သေးရှိသည်။
• သင်သည်အဘယ်သို့အပြင်ကလူမှပြောသင့်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေနဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအရုံးအတွက်မပိုပြီးမဟုတ်သလိုလျော့နည်းအခွင့်အရေးများရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအားလုံးဘာသာအယူဝါဒရှိသူမတူညီ၏နှင့်မျှမတို့ဘာသာအယူဝါဒရှိသူမတူညီ၏လူတို့အဘို့လည်းကျဉ်းမြောင်းသောဖြစ်လာတဲ့အခါ, ငါသည်ကိုယ်ပေါ်မှာမခံမရပ်ရကြလိမ့်မည်။
• ငါတို့အပေါ်မှာရပ်တည်ရန်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် Agnostic လုံလောက်သည့် WS ပလက်ဖောင်းကျယ်ပြန့်စေရန်အနှစ် 40 အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြနှင့်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လျှင်ယခုငါပြောသို့မဟုတ်ဆုတောငျးဖို့ straightest သြသဒေါက်ဘာသာရေးသမားခွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကက်သလစ်စောင့်ရှောက်ဖို့လာမယ့် 40 စစ်တိုက်ပါမည်ဟုကသူတို့ကိုပြောပြခြင်းနှင့် အပျေါမှာသူမ၏ပုတီးရေတွက်။
• မိခင်များမှန်ကန်စွာဒုနှင့်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကျင်းပနိုင်ပါသည်မီ, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယေဘုယျ demoralization အဘို့, သူတို့အခွအေနနဲ့အခွအေနဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးရဲ့ဘဝတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသိမ်းယူရကြမည်။ (1901)
• စက်ဘီးစီးကမ္ဘာပေါ်မှာတစုံတယောက်သောသူသည်အရာထက်အမျိုးသမီးတွေ emancipate ပိုမိုပြုတော်မူပြီ။ ဒါဟာသူမ၏သူမ၏ထိုင်ခုံကြာယခုအချိန်တွင် Self-မှီခိုခြင်းနှင့်လွတ်လပ်ရေး၏ခံစားချက်ပေးသည်; နှင့်ဝေးသူမ, untrammeled womanhood ၏ရုပ်ပုံတတ်၏။
• ငါမဆိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်တန်းတူလစာတန်ဖိုးတူညီသောအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကို Save တောင်းဆိုကြဘူး။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားဖြင့်ငဲ့ကြည့်နေစရာခံရဖို့ကဲ့ရဲ့; သူတို့ကိုသင်လုပ်သားများကဲ့သို့မအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါစေ။
• ကျနော်တို့ကသူတို့ unalienable အခွင့်အရေးခံစားရှိလူ secure မှဖြစ်အစိုးရ၏ပြည်နယ်အခိုင်အမာ။ ကျနော်တို့ကလာသောလေရှေ့မှာအစိုးရများအခွင့်အရေးများပေးနိုငျကွောငျးဟောင်းတရားသေအယူဝါဒကိုပစ်။
• မကြာခဏအန်သိုနီမှစွပ်စွဲ, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတားမြစ်အကြောင်းကိုဒီကိုးကား 1869 ခုနှစ်တွင်တော်လှန်ရေး၌ရှိ၏, အမည်မသိစာကို "အေ" လက်မှတ်ရေးထိုး အန်တိုနီတို့ကအခြားဆောင်းပါးများကြောင်းထုံးစံ၌လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့, ဒါကြောင့်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုသံသယရှိသူဖြစ်ပါတယ်မခံခဲ့ရပါ။
ကျွန်မကလေးက-လူသတ်မှု၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရာဇဝတ်မှု deplore အဖြစ်တာစိတ်အားထက်သန်စွာငါက၎င်း၏ဖိနှိပ်မှုကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်အဖြစ်, ငါသည်ဤကဲ့သို့သောဥပဒေလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ ... မယုံကြည်နိုင်ပါ။ အမြစ်ဖြစ်နေဆဲစဉ်ကသာ noxious ပေါင်းပင်၏ထိပ်ကိုပိတ်ထား mowing ခံရဖို့ငါ့ကိုပုံရသည်။ ကျနော်တို့ကာကွယ်တားဆီးရေးမဟုတ်ဘဲမျှသာပြစ်ဒဏ်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးအမြစ်ကိုရောက်ရှိ, ထိုသို့ဖျက်ဆီးရမည်။
ငါ၏အခြို့သောအသိပညာဤရာဇဝတ်မှုအဘယ်သူ၏မေတ္တာတော်ကိုငြိမ်ဝပ်၏, အပန်းဖြေသူတို့အားချုပ်ထားနှင့်ဖက်ရှင်ဘဝသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ကသူတို့ကိုဦးဆောင်သည်မဟုတ်သော်လည်း, အဘယ်သူ၏ကျောက်ကပ်အသက်ဝိညာဉ်တို့သည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလုပ်ရပ်ကနေပုန်ကန်သေူကျင့်သုံးနေသည်နှင့်အဘယ်သူ၏နှလုံးသားများထဲမှာ မိခင်ခံစားမှုစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် undying ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကို, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်ကျူးလွန်သူတို့ကိုအတင်းလိုအပ်သောအဆင်မပြေမှုမှဤအမျိုးသမီးများမောင်းနှင်ခဲ့သလဲ ဖြေကြားခံနေရဤမေးခွန်းကိုကျွန်မဆေးတစ်လက်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာပြောဆိုနိုင်စေဖို့အဖြစ်ကျနော်တို့ဒီကိစ္စကိုသို့ထိုကဲ့သို့သောထိုးထွင်းသိမြင်ရကြလိမ့်မည်, ယုံကြည်ကြသည်။
• စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအခြား၏ထပ်ကိန်းဖြစ်, သို့မဟုတ်အခြားသူမအတွက်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူမသည်သူမကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအညီအမျှလူနှငျ့အတူသူမ၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းပျော်ရွှင်မှုကိုအဘို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ခပ်သိမ်းသောမိန်းမတို့သည်ရန် "သတင်းကောင်းဧဝံဂေလိတရား" ကိုကြွေးကြော်ပါလိမ့်မယ် ... မိမိတစ်ဦးချင်းစီ၏ဉာဏျပညာနှငျ့ခှနျအားနားမှာရပ်သို့မဟုတ်လဲကြ ... သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်လိမ့်မည် , ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ... ဘုရားသခင်ကသူမကိုအားပေးပြီးမှနေ့စဉ်အခွက်တဆယ်, အသက်တာ၏မှုကြီးဖြစ်သည်။ (နဲ့အတူအန်သိုနီ Stanton တို့ )
Susan B. Anthony များအတွက် Related အရင်းအမြစ်များ
Susan B. Anthony အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Susan B. Anthony ရုပ်ပုံများ
Susan B. Anthony သို့မဟုတ်အကြောင်းကိုစာအုပ်များ
အဲလစ်ဇဘက် Key ကိုနှင့်သူမ၏သမိုင်း-ပြောင်းခြင်းတရားစွဲဆိုမှု
WWE Diva Sable ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Saluer - နှုတ်ဆက်ရန်, နှုတ်ဆက်; တဦးတည်းရဲ့အခွင့်ကိုယူမှ
ဂျပန်က 'ငါကိုသင် Love' 'ဟုပြောဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
အဆိုပါ Equilibrium constant Find လုပ်နည်း
အီရတ် | အချက်အလက်နဲ့သမိုင်း
အလေ့အထများနှင့်စစ်မှန်သောချို့ယွင်းမှုများ၏လက္ခဏာရပ်တွေ, အမိန့် Hemiptera
'' မိသားစု Guy '' Cast ကို
Grand Central Terminal နှင့်ခန့်တည်ဆောက်ခဲ့ကွောငျးအဆိုပါစီးတီး
အီလက်ထရောနစ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုအဘယ်သူသည်ပြည်သူ့: Weirdest ပုံပြင်များ
ပုံမှန်ကြိယာ Sembler: ဒါဟာအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ခေတ်မမီတော့အသနားခံ 52 အာဇာနည်မြင်းနေအိမ်လိုအပ် Says